Indlu yaseBreton: NgaseLwandle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDamian
IBreton House likhaya elipholileyo, elinobubele kusapho elinombono wolwandle. Ifanelekile kuye nabani na ojonge ukuphonononga lo mmandla unomtsalane weNova Scotia.
I-wi-fi ekhawulezayo enegumbi lokulala labantwana, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuphumla, i-jet tub, iyadi enkulu, indawo yomlilo kunye neendawo zokupaka kwindawo yokupaka!
Ilungele ukushukuma okanye ukuphumla nosapho: Thatha uhambo lwangokuhlwa ecaleni kwendlela, ujonge idolophu, okanye uphumle kwi-jet-tub kwaye upholile ukuya kwiNetflix kwigumbi lokuphumla.
Ezinye izinto ezisisiseko ezifana neti, ikofu, iswekile kunye nezinye izinto ezibalulekileyo ezibonelelweyo.
Eli khaya ligumbi lokulala libini ligcisa eligcinwe kwindawo enevibes enkulu; ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuphumla, igumbi lokuhlambela (enebhafu yokuhlambela yejethi!) kunye nescreen esikhulu esisicaba esineNetflix. Ngaphandle kukho i-driveway parking, kunye neyadi enkulu enomgodi womlilo kunye nemibono enkulu yokutshona kwelanga.
Iphelele kwintsapho ye-4, kodwa kukho ibhedi ye-sofa yokukhupha abantu aba-2 abongezelelweyo ukuba kuyimfuneko; Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu. Igumbi lokulala labantwana leNkwili eNkwili etyheli linebhedi enamawele angasentla, amawele asezantsi. Igumbi lokuphumla likwanayo nebhedi yesofa esongwayo.
Xa wonele ngeNetflix kwaye uzipholele kukho imidlalo yebhodi emininzi, amakhadi, iincwadi kunye nezinto zokudlala ezininzi zokugcina abantu bayo yonke iminyaka bonwabile ngalo lonke ixesha lokuhlala.
Indlu yonke yeyakho; ngomnyango wabucala, zive ukhululekile ukuzijonga ngaphakathi nangaphandle ngokungena kwekhowudi-key.
Kuba bhetyebhetye; Ikhitshi linetafile enkulu, kukho idesika encinci kwigumbi labantwana kunye ne-wifi ekhawulezayo
*** Senza konke okusemandleni ethu ukuba samkele izilwanyana zasekhaya xa siceliwe. $20.00 Ngesilwanyana ngasinye, Ngobusuku ngabunye umrhumo owongezelelweyo ***
Siyabathanda abahambi bazo zonke iintlobo kwaye siyazama ukwamkela izilwanyana zasekhaya apho kunokwenzeka. Ukuba ungathanda ukuhlala nesilo-qabane sakho, siyakwenza konke okusemandleni ethu njengoko sisazi iindawo ezininzi ezisamkelayo. Nceda uthumele umbuzo wokubhukisha ochaza inani lezilwanyana zasekhaya, kwaye siya kuphonononga kwaye sizame ukulungiselela. Ukuba yamkelwe kukho i-20.00 ngesilwanyana ngasinye ngobusuku bokuhlawula ukucoca njl.
Nceda uqaphele: Indlu yaseBreton yindawo ebandakanyayo, singabamkeli abaqukayo kwaye bamkelekile abahambi kunye nabahambi bazo zonke iindlela.
UDame & Am
(yena kunye naye)
4.88 ·Izimvo eziyi-216
4.88 · Izimvo eziyi-216
Ubumelwane obuzolileyo ngaseMarina kuhambo oluthandekayo olusecaleni kwezibuko. Kufuphi neendawo zokutyela, iiCafe's kunye nokuqhuba okufutshane ukusuka kwiCabot Trail. IGroovy Cafe kunye ne-Ice Cream kwindlela eya kwindawo engasemanzini! (20 imizuzwana ukuhamba)
Kufuphi nekofu yaseTim Hortons (imizuzu eyi-7 yokuhamba), indawo yokutyela yaseMiller (imizuzu eyi-14 yokuhamba), i-Subway, uKumkanikazi weDairy, iPizza (imizuzu emi-6 yokuhamba), ii-pubs njl (i-Shindigs 5 min walk)
Idolophu ineWalmart, iCan Tire kunye nesiqhelo.
Kukho ikhowudi-isitshixo sokungena ukwenzela ukuba kube lula kuwe kodwa sihlala kufutshane kwaye sinokufumaneka ngesicelo okanye ukuba ufuna naluphi na uncedo. Sitsalele umnxeba okanye umyalezo.
Sizama ukufumaneka kunxibelelwano kude kube ngu-8pm iintsuku ezininzi, kwaye kamva ukuba siyakwazi.
Kukho ikhowudi-isitshixo sokungena ukwenzela ukuba kube lula kuwe kodwa sihlala kufutshane kwaye sinokufumaneka ngesicelo okanye ukuba ufuna naluphi na uncedo. Sitsalele umnxeba ok…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Port Hawkesbury